MinSayYar - Page 1471 of 1542 -
မျက်မှန်တပ်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း (၇)မျိုး
မျက်မှန်ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို မျက်မှန်တပ်နေရသူတွေသာသိမယ်။ ကိုယ်နှင့်မခွာအမြဲဆောင်ယူသွားနေရတဲ့ပစ္စည်းထဲမျက်မှန်ကထိပ်ဆုံးပါတယ်။ မျက်မှန်ကိုင်းလေးကျိုးသွားလို့ ဆိုင်သွားပေးထားရင်တောင် တစ်ရက်လောက်မျက်ကန်းဘဝထဲရောက်သွားသလိုခံစားရတာမျိုးက စာရေးသူကိုယ်တွေ့ပါ။ ဒါကြောင့်မျက်မှန်တပ်သူတွေအတွက် မျက်မှန်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတလည်းရပြီး အကျိုးလည်းရှိစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။အမှောင်ထဲမှာမျက်မှန်ရှာတဲ့အခါ ကိုယ်အပြင်ထွက်ခါနီးမှ မီးကပျက်၊ မျက်မှန်ဘူးကိုလည်းဘယ်လိုရှာရမှန်းမသိတဲ့အခါ ဒီနည်းလေးသုံးလို့ရပါတယ်။ အနုမြူသော့ချိတ်ကို ကိုယ့်မျက်မှန်အိတ်ထဲချိတ်ထားပါ။ သို့မဟုတ်တွဲချည်ထားပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲမှောင်နေတဲ့အခန်းဖြစ်ပါစေ လွယ်လွယ်နဲ့ရှာတွေ့သွားမှာပါ။ ၂။မျက်မှန်ကိုင်းချောင်ကျတဲ့အခါ မျက်မှန်ကိုင်းချောင်ကျတာကတော့ မျက်မှန်ကိုင်းထိပ်က ခပ်ပြေပြေဖြစ်ပြီး နားပေါ်ကချော်ကျလို့ပါ။ အဲ့ဒီ့အခါ မျက်မှန်ကိုင်းထိပ်ကို ရေနွေးပူပူထဲစိမ်ပြီး ပျော့လာတဲ့အခါ ဆွဲကွေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအခါ နားပေါ်က ချော်ကျတဲ့ပြသနာမရှိတော့ပါဘူး။ နောက်ထပ်နည်းတစ်ခုကတော့ ကိုင်းထိပ်နားလေးတွေကို ခေါင်းစည်းကြိုးဗြောင်သေးသေးလေးနဲ့ ပတ်ထားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒါကလုပ်ရလည်းလွယ်ပါတယ်။ ၃။မှန်မျက်နှာပြင် ရေငွေ့ဟပ်တဲ့အခါ YBS ကားပေါ်က ဆင်းလာတဲ့မျက်မှန်သမားတိုင်း ခံစားဖူးမှာပါ။ မျက်မှန်ချွတ်ပြီးဆင်းပြန်တော့လည်း ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဝေဝါးနေတဲ့အဖြစ်။ ရေငွေ့မဟပ်စေချင်ရင်တော့ နည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ရေမစိုသေးတဲ့ ဆပ်ပြာကို မှန်မျက်နှာပြင်ပေါ် နည်းနည်းပွတ်ပြီး […]
သြစတေးလျရောက် မြန်မာဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ရေးတဲ့ Post ပါ။—–ခေတ်စားနေတဲ့ ဒူးနာဝေဒနာ ။ ယခုတခေါက် မြန်မာပြည်ပြန် အရောက်။ ရွာကို ပြန်တယ်။ မုံရွာ ၊ မန္တလေး ၊ ရန်ကုန်က မိတ်ဆွေတွေ ၊ အမျိုးတွေ ကျနော် ရောက်တယ်ဆိုတော့ တွေ့ချင်တာရော၊ ကျန်းမာရေးတိုင်ပင်ချင်တာရော လာကြပါတယ် ။ မုံရွာ ၊ မန္တလေး ကြိုတင်ဖုံးဆက်ထားပြီး သူတို့က ကျနော် တည်းမည့်အိမ် ကြိုရောက်နေကြတယ် ။ ကြည့်ပေးရတာ.အခြားကျန်းမာရေးက (၃) ခုဘဲရှိ ။ ကလေး( ၂) ဦး ပိန်လှီနေတာ ။ တဦးက မျက်စေ့ယောင်နေတာ ။ ကျန် လူအားလုံးက ဒူးနာဝေဒနာတွေချည်းပါပဲ ။ ရွာမှာအတွေးတခု ဝင်လာပြီး အမျိုးတွေကို မေးပါတယ် […]
မတ်လကုန်အထိ စာသင်ကာလတိုးမြှင့်မှု ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ် ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်
အခြေခံပညာ ကျောင်းတွေရဲ့ စာသင်ကာလ တိုးမြှင့်ထားတဲ့ကိစ္စအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မူလအတိုင်းသာ ဆက်လက်ထားရှိဖို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများ အဖွဲ့ချုပ်က ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် မှာ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်မှာ အခြေခံပညာ ကျောင်းတွင်းစစ် စာမေးပွဲတွေကို တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ကျင်းပဖို့နဲ့ မတ်လကုန်အထိ ကျောင်းတက်ဖို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနက စီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထားထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ မတ်လကုန်အထိ ကျောင်းတက်ရပါက ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ နားနေချိန် လျော့နည်းသွားစေနိုင်တာ၊ မတ်လအတွင်း အခြားအတန်းတွေမှာ ပညာသင်ကြားရေးတာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်နေစဉ် စတုတ္ထတန်း၊ အဋ္ဌမတန်းနဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွေအတွက် တာဝန်တွေပါ တစ်ပြိုင်တည်း ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်လို့ ဆရာ၊ ဆရာတွေအတွက် ဝန်ပိစေမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် […]
”အိမ်တွင်းမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့ ”အရာ (၆) မျိုး”……
သင့်အိမ်မှာ အကြောင်းအရာ ထွေထွေထူးထူးမရှိဘဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်လား? ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေ ကျဆင်းနေလား? အိမ်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့ ဝိညာဉ်တွေရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ခံစားနေရလား? “ဈေးသုံးလည်း မကြွယ်နဲ့၊ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့” ဆိုသလို ရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းက ယနေ့တိုင် အကျုံးဝင်နေသေးတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို မေ့ပစ်လို့တော့ မရပါဘူး။ အခုပြောပြမှာကတော့ အိမ်ထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကြောင့်ချည်းပဲ ကံဆိုးနေတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီအရာတွေကြောင့် ပိုကံဆိုးသွားနိုင်တယ်၊ ကံကောင်းခြင်းတွေကို ပိတ်စေနိုင်တယ်လို့ပဲ ဆိုလိုပါတယ်။ သတိဟူသည် လိုသည်မရှိဘူး မဟုတ်လား။ သင်ကံဆိုးနေတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့အခါ ဒီအရာတွေကို အိမ်ထဲမှာ၊ အခန်းထဲမှာ ထားမိလားဆိုတာ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ ၁) လႈပ္ကုလားထိုင္ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့ အခန်းထဲမှာ လှုပ်ကုလားထိုင်က […]
ကွမ်းရွက် အဖျားနှင့် အရင်းကို ကွမ်းမယာမှီ ဖြတ်ပစ်ရသော အကြောင်းရင်
ကွမ်းရွက်ရဲ့ အရင်း နဲ့ အဖျားကို ဘာကြောင့်ဖြတ်ပစ်ရသလဲ…? တမ္ဗုလဿ——ကွမ်းရွက်၏ မဇ္ဈေ————-အလယ်ဖြစ်သော ပတ္တေ————အရွက်၌် ကုဝေရော——-ကုဝေရနတ်သည် သဒါ————-အခါခပ်သိမ်း ရက္ခတိ———-စောင့်၏ ။ မူလမှိ————-အရင်း၌် ယက္ခော———-ဘီလူးသည် ရက္ခတိ———–စောင့်၏ ။ အဂ္ဂမှိစ———-အဖျား၌လည်း ဒေဝမိစ္ဆာ——–နတ်ယုတ်မာသည် ရက္ခတိ———-စောင့်၏ ။ တသ္မာ———-ထို့ကြောင့် တာနိ———–ထိုအရင်းအဖျားတို့ကို ဆိန္ဒိတွာ——–ဖြတ်၍ ဘုဉေ်ဇယြ——-စားရာ၏ ။ ဧဝံ——-ဤသို့ စားသည်ရှိသော် သိရီ——ဘုန်းကျက်သရေသည် ပဝၯတိ—————-တုိးပြား၏ ရှေးပညာရှိတို့ိဆိုစကား မမှားနိုင်ပါဘူး ဗဟုသုတပေါ့ ကွမ်း ဆေးလိပ် အရက် ဘီယာ မူးယစ်ဆေးတို့ ဆိုတာက လုံးဝကင်းကင်း ရှင်းရှင်းနေနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ ..။ အရှင် ပညိဿရ Unicode ကွွမ်းရွက်ရဲ့ အရင််း နဲ့ အဖျားကို ဘာကြောင့်ဖြတ်ပစ်ရသလဲ…? တမ္ဗုလဿ——ကွွမ်းရွက်၏ မဇ္ဈေ————-အလယ်ဖြစ်သော ပတ္တေ————အရွက်၌် ကုဝေရော——-ကုဝေရနတ်သည် သဒါ————-အခါခပ်သိမ်း […]
ကံကောက်းခြင်းတွေရောက်လာမယ်ါနိမိတ်တွေ ကံကောင်းခြင်းတွေ သင့်ဆီကို ရောက်လာတော့မယ် ရှေ့ပြေးနိမိတ်တွေ မ ကြာ ခင်မှာ ကံ ကောင်းခြင်း တွေ သင့်ဆီ ကို ရောက်လာတော့ မယ်ဆို တာ ဘယ်လို သိနိုင်လဲ.ကံ ကောင်း ခြင်း တွေကို ကိုယ့်ဆီ ကို ရောက် လ ာတော့မယ် ဆို တာ ကို ရှေ့ပြေးနိမိတ် သ င်္ကေ တ တွေ က တစ်ဆင့် သိ နိုင် ပါ တယ်။ နိုငျငံ တိုငျး မှာ တော့ ကံ ကောငျးခွငျး ရဲ့ နိ မိတျ က ငျ်ကေ တတှနေဲ့ ပတျ သကျပွီး အ […]
ပိုးသတ်ဆေးကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နည်း ဘဝတူ တောင်သူများ ပိုးသတ်ဆေးကို ဈေးကြီးပေးဝယ်စရာမလိုဘဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်း ဘ ဝ တူ တောင်သူ လယ်သ မား အ တွက် စ ပါး ဈေး သီးနှံ ဈေး ကျ နေ တဲ့ အ တွက် သွင်းအား စု တစ် ခု ဖစ်တဲ့ ပိုး သတ် ဆေး များ ကို ဈေး ကြီး ပေးဝယ်သုံး နေ ရ တာ တွေ ကို လျော့ ချ နိူင် အောင် ဓာ တု အန္တရယ်လဲ ကင်း လွတ်ဖို့ အ တွက် ကျွန် တော် […]
”ညည အိပ်လို့ မရအောင် ချောင်းဆိုးနေရင် ”ဒီနည်းလေးတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ”…….
(၁) မအိပ်ခင် ရေနွေးကြမ်း ပူပူလေးထဲ ပျားရည် ထည့်သောက်ပါ ။ ပျားရည်ကတော့ အရောင်အရမ်း လျော့ကျစေကာ ချွဲသလိပ်တွေ ကြေ စေပါတယ်။ ဘာမှမရှိရင်တောင် ရေနွေး ပူပူလေးထဲကို ဆားခတ်ပြီး ပလုတ် ကျင်းပေးပါက အရောင်အရမ်းကျစေလို့ အသက်ရှူ လမ်းတစ်လျှောက် ချွဲတွေ ဖြိုခွဲပစ် နိုင်ပါတယ်။ ပူဒီနာရွက်သို့မဟုတ် ပင်စိမ်းရွက်ကို ဝါးစားနိုင် ပါက ပိုပြီးအိပ်ပျော်စေနိုင်တဲ့ သတ္တိရှိလို့ အိပ်ရေး မပျက် စေနိုင်ပါ။ ချောင်းဆိုးလည်း သက်သာ၊အိပ်လို့လည်း ကောင်းစေ ပါတယ်။ (၂) အနေအထားလေး ပြောင်းအိပ်ကြည့်ရအောင် အိပ်ပျော်နေစဉ် ချောင်းဆိုးရ ခြင်းဟာ ကမ္ဘာမြေကြီး ဆွဲငင်အားကြောင့် ဖြစ်တယ်။ လှဲပြီးကျောချအိပ် လိုက်တဲ့အခါ နှာခေါင်း အနောက်ဘက် ထဲက အရည်တွေဟာ လည်ချောင်းထဲ ပြန်စီးဝင်လာတော့ […]
”အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေနဲ့ ပိုမိုသင့်တော်တဲ့” နှစ် ၁၀၀ သီး”ရဲ့ ကျန်းမာရေးစွမ်းပကားများ”………
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေနဲ့ ပိုမိုသင့်တော်တဲ့ နှစ် ၁၀၀ သီးရဲ့ ကျန်းမာရေးစွမ်းပကားများ ဇော်ဂျီ / ယူနီကုဒ် Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ကျန်းမာလိုသူတိုင်း နှစ်၁၀၀ သီးကိုစားပါ Hitotsubashi University ရဲ့ Kunitachi Campus မှာ ကမ္ဘာဦးပင် (Ginkgo) တွေကို လမ်းဘေးမှာ တန်းစီ စိုက်ထား ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ နှစ်တစ်ရာသီး လို့လဲ ခေါ်ပါတယ် (၁၀) မိနစ်လောက် ပြုတ် အအေးခံ အခွံနွှာ ဒညင်း သီး လို့ သဘောထားပြီး ငပိရေ နဲ့ အဝစား ပါတယ်။ နှမ်းဆီ နဲ့ ဆားဖြူး စားပြီး လဘက်ရည် ကြမ်း လေးနဲ့ သောက်ကြည့်ပါ။ ဆေးပညာမှာ ဘာတွေအသုံးကျလဲဆိုတော့ …. […]
အရာအားလုံးကောင်းစေမယ့်ဂါထာတော် အားလုံးကောင်းအောင်အမြဲရွတ်သင့်သည့်ဂါထာတော် ဥုံ သိ ဒ္ဓိ ဘုရား ထိပ်မှာ ထား နား မှာ ဗြ ဟ္မာ လက်မှာ သိကြား ၊ ခါး မှာ ဘီ လူး ဒူူး မှာ ခြင်္သေ့ ၊ ခြေ မှာ န ဂါး ကိုယ်မှာ ဠုန်၊ အ စောင့်ထားပါ ၏ ဥုံ ကော က္ကု သံ ၊ ဥုံ ကောဏ ဂုံ ၊ ဥုံကဿ ၊ ဥုံ ဂေါ တ မ ဥုံ အ ရိမေ တ္တ ယျ ဥုံ ဒီ ပ […]
Previous 1 … 1,470 1,471 1,472 … 1,542 Next
ဆန္ဒပြကြသူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ Defense တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဗားကရာလမ်းပေါ်က သင်ခန်းစာ !
မိန်းကလေးတွေ ဖတ်ပေးကြပါ အရေးကြုံရင် အသုံးဝင်ပါတယ် – Han Nyein Oo